Maamulada Koonfur Galbeed iyo Puntland oo heshiis gaaray – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeWararka MaantaMaamulada Koonfur Galbeed iyo Puntland oo heshiis gaaray
Maamulada Koonfur Galbeed iyo Puntland oo heshiis gaaray
September 26, 2020 marqaan Wararka Maanta 0
Madaxweynaha maamulka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa xalay ka qeybgalay xaflad soo dhoweyn ah oo isaga iyo wafdigiisa loogu sameeyay xarunta Madaxtooyada Koonfur Galbeed ee magaaladda Baydhabo.
Saciid Deni ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa Baydhabo , waxaana uu kulamo kala duwan la qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada.
Waxaa ay sidoo kale ku heshiiyeen ilaalinta amniga dadka kasoo jeedda degaanada maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan degaanada maamulka Puntland.
Ajnabi laga soo afduubtay Xuduuda Kenya oo laga baadi goobayo Somalia.
DEGDEG:Mursal oo farriin adag soo diray,Farmaajo oo naxsan,Dagaal Culus, RW rooble hal arrin dhibtay